Shiinaha Light brown T101 / Brown T108 / Brown T103 factory and saarayaasha | Baizan
Buni khafiif ah T101 / bunni T108 / bunni T103
Baizan PVB interlayer waa qalab macromolecule ah oo lagu sameeyay polyviny, cusbi butyral ah oo caag ah laguna soo saaray balaastik. Filimkeena PVB oo leh daahfurnaan iftiin aad u fiican, kuleyl iyo iska caabin qabow, dabacsanaanta, wuxuu sifiican ugu dhegan yahay dhalooyinka aan dabiici ahayn iyo sameynta muraayadaha badbaadada la dahaaray. Qeexitaanka caadiga ah ee dhumucdu wuxuu u dhexeeyaa 0.2 mm - 2 mm.
Isku xiraha Baizan PVB waxaa badanaa loo isticmaalaa sameynta muraayadaha badbaadada. Muraayadda la dahaadhay waa muraayad gaar ah oo lagu dhejiyay filimka PVB inta udhaxeysa laba lakab oo ah muraayad caadi ah, taas oo kuleylka heerkulka iyo cadaadiska sare leh, ay ku xiran tahay inay abuurto hal dhisme. Sababtoo ah PVB muraayadda dahaarka leh oo leh shaqada badbaadada, ilaalinta kuleylka, caddeynta dhawaaqa, iyo iska caabbinta ultraviolet, iwm
Hore: Nadiifi pvb
Xiga: cagaar fudud GN101 / Vridis GN108
Cagaar on cad C102
Buluug buluug ah B113 / buluug daahsoon B102 / Ford ...